Madaxweynaha dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo wefti uu hogaaminayo oo si weyn loogu soo dhaweeyey Qardho.[Masawiro]
October 20, 2017 - Written by Editor
Qardho:-Madaxweynaha dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo wefti uu hogaaminayo ayaa maanta 20 October 2017 booqasho ugu soo ambabaxay magaalada Qardho ee gobolka Karkaar. Madaxweynaha iyo weftiga uu hogaaminayey oo kasoo kicitimay magaalada Boosaaso ayaa kormeero kusoo maray dhammaan kaantaroolada inta u dhexaysa Boosaaso iyo Qardho, waxaana uu Madaxweynuhu halkaasi kula kulmay ciidamada ka hawlgala goobahaasi, isagoona Madaxweynuhu ka xog waraystay xaaladdooda guud, amni iyo midda gaarka u ahba, isla markaana waxa uu Madaxweynuhu kula dardaarmay in markasta xasuusnadaan shaqada baaxaddale ee ay u hayaan shacabkooda.
Sidoo kale Madaxweynaha ayaa kormeeray dhismaha wadada ceel-daahir – ceerigaabo oo dhismeheedo meel wanaagsan marayo, waxaana Madaxweynaha iyo weftiga uu hogaaminayey kormeerkooda ku gaadheen 5km oo dhanka galbeed ka xigta magaalada Ceel-daahir oo iyadu ah goobta laga bilaabay wadada, 55km ayaa wadada loo dhamaystiray caro-tuur iyo jayba, 15km oo kamid ahna isbuucan gudihiisa ayaa la dhigi doonaa caro-tuurka iyo jaygaba, guud ahaan wadada inta lagashaqeeyey ayaa ah 70km.
Madaxweynaha dawladda Puntland oo safarkiisa sii wata ayaa waxa uu kulan la qaatay waxgaradka magaalada Carmo, waxaana ay Madaxweynaha uga xog warameen xaaladda amni iyo horumarba ee magaalada , isagoona Madaxweynuhu ku booriyey waxgaradkaasi inay ka shaqeeyaan nabadda, xasiloonida iyo horumarka magaalada, isla mar’ahaantaana ay ku dedaalaan sidii ay uga shaqayn lahaayeen xasiloonida iyo kala danbaynta dhammaan degaanada hoosyimaada magaaladaasi.
Madaxweynaha dawladda Puntland iyo weftiga u hogaaminayey ayaa markii ay soo gaadheen degmada Qardho ee gobolka Karkaar waxaa si diiran ugu soo dhoweeyey maamulka gobolka Karkaar, kan degmada Qardho, masuuliyiin ka tirsan goleyaasha dawladda Puntland, taliska qaybta gobolka Karkaar, nabadoono, waxgarad, siyasiyiin iyo qaar kamid ah shacabka magaalada Qardho.
“Dad-weynaha reer Qardho, maamulka gobolka iyo kan degmadaba waxaan aad idiinka mahad celinayaa soo dhoweyntii quruxda badnayd ee aad nagu soo dhoweyseen, runtii aad ayaan uga mahadnaqayaa iyadoo jimce ah, waa wanaag iyo soo dhoweyn aan uga baranay dad weynaha degmada Qardho iyo guud ahaan gobolka Karkaarba” ayuu yiri Madaxweynuhu.
Dhinaca kale, Soo dhoweyn kadib Madaxweynaha ayaa dhagax dhigay cisbitaalka weyn ee degmada Qardho, kaas oo dib loo casriyandoono loona balaadhindoono qayn kamid ah cisbitaalka oo la dhisay sanaddii 1960-kii, waxaana uu Madaxweynuhu Xusay in dhanka caafimaadka uu gobolka Karkaar aad uga wanaagsan yahay hadana loo baahan yahay in markasta kor looqaado, lagana sii wanaajiyo meesha uu hadda joogo.
“Sharaf-weyn bay ii tahay inaanu dhagax dhigno balaadhinta cisbitaalka oo baahi weyn loo qabo, adeega caafimaad ee gobolka runtii aad buu u wanaagsan yahay, haddana waxaan rabnaa intaas inuu kasii fiicnaado, kasii wanaagsanaado, maamulka cisbitaalka, maamulka caafimaad ee gobolka shaqo fiican bay qabteen waana ku amaanaynaa” ayuu yiri madaxweynaha dawladda Puntland.
” Dhismaha Cisbitaalka waxaa iska kaashan doona dawladda, dadweynaha iyo maamulka gobolka Karkaar, waxaan rajaynaynaa inaanu helno cisbitaal wanaagsan, waxaan rajaynaya inuu ku dhammaado wakhti aan dheerayn, adeega caafimaad ee uu u hayo gobolka iyo degmadaba uu horumaro ayaan rajaynayaa” ayuu yiri Madaxweynaha dawladda Puntland.